Iindaba - Inkcazo yeJambs
Cima iiJamb: Izakhelo zeminyango zendalo ngaphandle kwamalungu okanye amaqhina.
Corner Seal Pad: Inxalenye encinci, ihlala yenziwe ngezinto ezinamandla, isetyenziselwa ukutywina amanzi ukusuka ekungeneni komphetho womnyango kunye nejamp, ecaleni kwegasket esezantsi.
DUbungakanani: I-latch esetyenziselwa ukukhusela ucango oluvaliweyo, i-latch eqhutywa ukusuka emnyango iye kumamkeli kwi-jamb okanye isakhelo.
Isiphelo Pad Seal: Isiqwenga se-foam esivaliweyo, esimalunga ne-1/16-intshi ubukhulu, esimile kwiprofayili yesill, ebotshelelwe phakathi kwesill kunye nejamb ukutywina ngokudibeneyo.
Isakhelo: Kwiindibano zomnyango, amalungu ejikelezo phezulu kunye nasemacaleni, apho ucango luxhonywe khona kwaye luxhonywe. Jonga ijamb.
Intloko, iNtloko Jamb: Isakhelo esingaphezulu esithe tyaba sendibano yomnyango.
Jamb: Isakhelo esithe nkqo secandelo lenkqubo yomnyango.
Kisiza: Isakhiwo esibhityileyo esisikwe kwinxalenye yokubumba okanye iincakuba zeesarha. I-Weatherstrip efakwe kwi-kerfs isikwe kwiminyango yomnyango.
Latch: Isipin okanye i-bolt eshukumayo esoloko ilayishwa entwasahlobo, eyinxalenye yesixhobo sokutshixa, kwaye ifaka isokethi okanye ikliphu kwincam yomnyango, igcina ucango luvaliwe.
Prehung: Umnyango odityaniswe kwisakhelo (i-jamb) kunye ne-sill, imo yezulu kunye neehenjisi kwaye ukulungele ukufakwa kwindawo evulekileyo.
Ukubetha: Icandelo lesinyithi elinomngxunya we-latch yomnyango, kunye nobuso obugobileyo ukuze i-latch elayishwe intwasahlobo inxibelelane nayo xa ivala. Uqhankqalazo lufanelekile kwimingxunya yokungena kwiminyango yomnyango kunye nokuqiniswa okubethelelwe.
Qalisa: Ixesha elisetyenzisiweyo kwinxalenye yerabha emazantsi okanye esiphelweni sesiphelo se-astragal, esitywina isiphelo kunye nesakhelo somnyango okanye isill.
Boss, Screw Umphathi: Inqaku elenza ukukhawulezisa isikrufu. Abaphathi be-Screw ziimpawu zesakhelo seplastikhi esibunjiweyo kunye neengcango zomnyango wealuminium.
Ibhokisi- ezinziweyo: Umnyango kunye neyunithi esecaleni ebiyelweyo njengeeyunithi ezahlukileyo, ezineentloko kunye neesill ezahlukileyo. Iminyango eyenziwe ngebhokisi iyadityaniswa kwiibhokisi ezinesakhelo sebhokisi.
Sill eqhubekayo: I-sill yomnyango kunye neyunithi esecaleni enebubanzi obupheleleyo kunye neendawo ezisezantsi zesakhelo, kunye nezithuba zangaphakathi ezahlula ii-sidelites kwiphaneli yomnyango.
Cove Ukubumbela: Inxalenye encinci yeenkuni ezibunjiweyo, ezihlala zenziwe ngobuso obukhethiweyo, ezisetyenziselwa ukunciphisa nokucofa ipaneli kwisakhelo.
Umnyango: Indibano yesakhelo kunye neglasi yeglasi, ethi xa ifakelwe emnyango kumngxunya owenziwe okanye osikiweyo, yenza umnyango ovulekileyo ngeglasi.
Icandelo lolwandiso: Iphaneli yomnyango emiselweyo eqingqiweyo ene-lite egcweleyo yeglasi, ecaleni komnyango wepatio enamacala amabini, ukwenza iyunithi yomnyango ibe ngumnyango weepaneli ezintathu.
Umdibaniso weminwe: Indlela yokudibanisa amacandelo amafutshane esitokhwe sebhodi kunye, ukuphela ukuya esiphelweni ukwenza isitokhwe esinde. Iindawo zomnyango kunye nezakhelo zihlala zenziwa kusetyenziswa isitokhwe sepine esidityaniswe ngomnwe.
Injengokubengezela: Izinto ezinamathelayo ezisetyenziselwa ukutywina iglasi kwisakhelo.
Ihenjisi: Amacwecwe esinyithi ane-pin yesilinda ebambelela kumda womnyango kunye nesakhelo somnyango ukuvumela umnyango ukuba ujike.
Ihenjisi Isitayile: Umphetho ogcweleyo wobude bocango, ecaleni okanye emaphethelweni omnyango onamathela kwisakhelo sawo ngeehenjisi.
Ayisebenzi: Ixesha lesithuba kwiphaneli yomnyango emiswe kwisakhelo sayo. Iiphaneli zeminyango ezingasebenziyo azixhomekekanga kwaye azisebenzi.
Ilitha: Indibano yeglasi kunye nesakhelo esijikelezileyo, esihlanganiselwe emnyango kumzi-mveliso.
Icandelo loLwandiso oluninzi: Kwiindibano zeminyango yepatio, ipaneli yomnyango emiselweyo kwisakhelo esahlukileyo, udityaniswe ngomda kwiyunithi yomnyango wepatio ukongeza enye ipaneli yeglasi kufakelo.
Muntins: Imivalo yokwahlula ngokuthe nkqo ethe nkqo nethe tyaba, enika umnyango ukuba ujonge izinto ezininzi. Zingaba yinxalenye yeefreyimu zelite, ngaphandle kweglasi, okanye phakathi kweglasi.
Isiporo: Kwiipaneli zomnyango ezifakwe igqunyiwe, inxenye, eyenziwe ngomthi okanye ngezinto ezidityanisiweyo, ezihamba ngaphakathi kwindibano, ngapha nangapha nangasentla. Kwiminyango egciniweyo kunye nomgaqo kaloliwe, iziqwenga ezithe tye phezulu nasezantsi, nakwiindawo eziphakathi, ezidibanisa kunye nesakhelo phakathi kwezitayile.
Ukuvulwa okungalunganga: Ukuvulwa okwakhelwe eludongeni okufumana iyunithi yomnyango okanye iwindow.
Umkhondo wesikrini: Inqaku lesill sango lomnyango okanye intloko yesakhelo ebonelela ngendlu kunye nembaleki yeeroli, ukuvumela ipaneli yescreen ukuba ityibilike ngapha nangapha emnyango.
Sill: Isiseko sesilinganiselo sesakhelo somnyango esisebenza kunye nomnyango wezantsi ukutywina umoya kunye namanzi.
Isilayidi iBolt: Icandelo le-astragal ephezulu okanye ezantsi, ebotshelelwa kwiintloko zesakhelo kunye neesill zepaneli zeminyango ezivalelweyo.
Uhambo: Indibano yeglasi eqingqiweyo inyuswe ngaphezulu kweyunithi yomnyango.
Iklip yezothutho: Isiqwenga sensimbi esisetyenziselwa ukubopha okwethutyana umnyango wendlu ovaliweyo wokuphatha nokuthumela, ogcina indawo efanelekileyo yolawulo lomnyango kwisakhelo.